Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri
Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri kwakuda kukwanisa makore 100, uye ruvengu rwacho rwuchiri rwakakurisa kwazvo.
Kurwa uku kurwa kwakaoma kusati kwakwanisa kugadziriswa nevanhu. Mwari akasarudza maJuda serudzi rwake akavapa Paresitina semusha wavo wechipikirwa. MuTestamente Yekare makazara tsananguro dzemarudzi aimukira Israeri kasingagumi nekuti idzi dzinenge dziri hondo pakati “paMwari naSatani” munzvimbo dzemweya. Kumukirana uku kuchaenderera mberi kwopararira mukati menguva yeKutambudzika kukuru apo pasi rese richatanga kumukira Israeri. Asi Jesu achadzokera kuvaJuda sedavi rakavhuniwa remuorivhi richadzoserwa pamuti wemuorivhi.
VAROMA 11:20 Ndizvozvo; vakavhuniwa nokusatenda kwavo; [maJuda] iwe unomirira nokutenda kwako. [kereke] Usazvikudza asi utye.
21 nokuti kana Mwari asina kurega matavi awo, haangakuregi newe vo.
22 Zvino tarira vunyoro nokukasharara kunavakawa, asi kwauri vunyoro bwaMwari, kana uchigara pavunyoro bwake;kana zvisakadaro, newe uchatemwa vo.
23 Naivo vo, kana vasingagari pakusatenda kwavo, vachabatanidzwa; nokuti Mwari unogona kuvabatanidza zve.
24 Nokuti kana iwe wakatemwa kumuorivhi, uri wokudondo pakusikwa kwawo, ukabatanidzwa pamuorivhi wakanaka, zvichipesana nokusikwa kwazvo zvikuru sei ava vari matavi awo,vangabatanidzwa pamuorivhi wavo!
25 Nokuti hama dzangu, handidi kuti musaziva chakavanzika ichi, kuti murege kuva namanyawi; kuti kuwomeswa kwomoyo kwakavuya pamusoro pavamwe vavaIsraeri kusvikira kuzara kwavahedheni kwapinda;
26 naizvozvo rudzi rwose rwavaIsraeri ruchaponeswa; sezvazvakanyorwa zvichinzi: PaZiyoni pachabuda Musununguri; Uchabvisa kusada Mwari kunaJakobho;
Kana Mwari apedza nekereke yavaHedeni, achadzokore kuvaIsraeri.
Sekurwiswa kunoitwa maKristu mumakereke naSatani, ndikowo kurwisa kwaanoita nyika yeIsraeri.
Hatifaniri kukanganwawo kuti vaIsraeri vakawanda vari kurarama zvakasununguka munyika dzevaArabu. Saka hachisi chokwadi kuti maJuda nemaArabu anogara achirwa. MaJuda aya haana chaanokanganisa Satani, nekuti chinangwa chake chikuru kuita kuti nyika yeIsraeri isadzoserwe kumaJuda. Kana maJuda akangodzokera mumusha mawo, ipapo maporofita maviri achavatungamirira kudzokera kunaMesiasi wavo. Saka Satani anotoedza nepaanogona napo kumisa maJuda kudzokera kunogara munyika yeIsraeri.
Matambudziko ari kukonzereswa nevavengi vavo achaita kuti maJuda agamuchire Mesia wavo, sezvo ndiye ega achagona kuvanunura.
Kurwa kuri pakati pemaJuda nemaArabu kune nheyo dzemweya. MaJuda kuna VaRoma Chitsauko 11 vakavimbiswa kudzokera, kwete kumusha wavakavimbiswa chete asiwo kunaKristu. Saka Satani anofanira kuvapikisa nenzira dzese kuti izvi zvisaitike. Ndararama panyika kwemakore anodarika 70, uye nyaya imwechete ndiyo iri kugara ichidzokororwa muhupenyu hwangu --- marudzi achiedza kuparadza Israeri. Ndakaberekwa muna 1944 panguva yekuitika kweHorokasiti yaHitler apo mamiriyoni matanhatu evaIsraeri akafa nekufema mweya wegasi, zvino semwana muduku ndikararama apo Israeri yairwiswa muna 1948 nehondo shanu dzemaArabu. Mutungamiri wenyika yeEgipita Nasser akatyisidzira maIsraeri kuti achavabvisa, hondo ikatevera muna 1956, 1963 uye muna 1973 nemauto echiArabu. Hakuna dzimwe nyika dziriko mazuva ano dzasangana nekurwiswa kwakawanda kudai. Saka idzi hadzisi hondo dzingori hondo zvadzo. Dziri kukurudzirwa nechimwe chinhu chakadzama. Hapana pakati pemarudzi ari kurwisa aya ese ane mvumo yekutora nyika muIsraeri. Havana mvumo yekutora nyika muIsraeri --- chinova chido chavo, sezvo vachiramba vachigadzirira, kubvisa Israeri pamepu.
Vanhu vane mvumo yekutora nyika iyi chete ndevemuParesitina.
Asi kune zvikwata zvinosvika zvinomwe zvekurwira rusununguko muParesitina vanokwanisa kurwisana pachavo kana maJuda akange asisipo. Hamasi muGaza vakasimuka kuva nesimba pamusoro pevanovapikisa. Saka dai kwaive kusisina maJuda, mamwe maParesitina aizorwisana pachawo vachirwira nyika, kungadai kusitorina rugare. VaSiria vari kurwisana pachavo muSiria kwakatoita ndufu dzinodarika 300 000 kusvika gore ra2017. Tisingatauri vapoteri mamiriyoni gumi nemaviri vakabviswa munzvimbo dzavo. VekuAmerica pavakakunda maTaribani echiMosiremu kuAfghanistan, maMosiremu ekuAfghanistan vakuru vehondo vaive vabatana kuti varwise maTaribani vakabva vatanga kurwisana pachavo, zvikabva zvaita kuti maTaribani amire zvakare. Yemen ine hondo yemarudzi izvozvi apo zviuru zvevanhu vasina mhosva zviri kufa apo maYemeni echiMosiremu ari kuurayana. Rugare nerunyararo hachisi chinhu chichapinda zviri nyore munyika dzemuMiddle East.
Kurwisana pakati pemaJuda nemaArabu kunokonzera kufa kwevanhu vasina mhosva vashoma pane kurwa kwemaArabu nemaArabu.
Kubva mugore 1992 vanhu vekuAlgeria vanodarika 200 000 vakaurayana zvinotyisa muhondo dzavo dzemaMosiremu nemamwe maMosiremu.
Asi Israeri ine kodzero dzekugara munyika yayo yechipikirwa.Mwari akavimbisa nyika iyi kumadzitateguru ayo Abrahama.
Saka takatarisana nedambudziko. Kodzero dzevanhu veParesitina dzekuti vave varidzi venyika uye kodzero dzaMwari dzekuti ape nyika imwechete iyi kumaJuda.
Tiri kurarama munguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia zvinoreva “kodzero dzevanhu”. Asi Bhaibheri rinotuka nekumhura nguva yatiri kurarama. Hakuna kurumbidzwa. Saka kumiririra kodzero dzevanhu kunotigonesa kuita zvatinoda kuita, kwakaipisisa kana kuchipikisana nekodzero dzaMwari dzekuita zvaanoda. Mwari anoda kuti maJuda adzokere muIsraeri kuti Messiah auye kwavari munguva yeKutambudzika kukuru.
“Israeri chikamu chekuenderera mberi kwerudzi rwevaJuda: Ndirwo rwega rudzi panyika rwunogara nyikaimwechete iyi, rwuine zita rimwechete nayo, rwunotaura mutauro mumwechete, ruchinamata Mwari mumwechete wavakanamata makore 3, 000 adarika.ukachera pasi unowana midziyo yenguva yaDavidi, mari yekuBar Kokhba, uye zvinyorwa zvine makore 2,000 zvakanyorwa nenzira inonyorwa nayo zvikwangwani zvekutengesa pazvitoro zvemumana medu.”
Mureza wenyika yavo ndiyo nyeredzi yaDavidi, mambo wemaJuda akararama makore akapoteredza 1050 BC. Hakuna rumwe rudzi rune nhaka yenguva yekare kudaro pamureza wayo.
Pasi paMosesi, Israeri yakava nyika mumakore akapoteredza 1500 BC, makore 2 000 Islam isati yasimuka. Vanhu veIsraeri yanhasi vanotaura mutauro umwechete uye tsika dzimwechete dzakaitwa nemaJuda akare uye chitendero chavo chakadarika nemazera akasiyana, kutangira pamakore akapoteredza 1900 BC nababa vavo Abrahama. Kubva pakukunda kwemaJuda kutora Israeri vari naJoshua makore akapoteredza 1450 BC, maJuda akava nesimba pamusoro penyika iyi kwemakore 1000 nehuvepo hwakaramba huchienderera mberi, zvisinei nehushoma munguva yeTestamente Itsva, munyika iyi mumakore anoda kukwana 3,400.
Mumashure mekukundwa kwemaJuda nevaRoma makore anoda kukwana 2, 000 adarika, maJuda akadzingwa akapararira (kuDiasipora nyika dzekunze), nyika yeIsraeri yakabva yatongwa nevaRoma, nemakurusedha echiKristu uye echiIsramu, nehushe hweOttoman, uye hushe hweBritain. Saka hakuna rudzi rumwechete rwakazoramba ruchiti Paresitina inyika yavo. Nyika iyi yakabva mumaoko mevamwe vapambi ichipinda mune mamwe. MaJuda mashoma akaramba arimo munyika mukati menguva dzese dzekutapwa kwavaiitwa uku.
Kwaive kumashure kwenguva yakadzokera maJuda mumusha mavo meJudea neSamaria mumakore ana 1948, apo tsika dzevaParesitina dzakaitwa dzikaparadzirwa pasi rese.
MaJuda anobva kuJudea. MaParesitina havana kubvira vabva kuJudea.
Hakuna mutauro unozivikanwa uchinzi chiParesitina, kana tsika dzechiParesitina zvimwechete nemarudzi ese echiArabu ari munzvimbo iyoyo.
Hakuna kubvira kwaita nyika yaizivikanwa nekunzi Paresitina ichitongwa nehurumende yeParesitina.
VaParesitina maArabu sina kusiyana nemaArabu anowanikwa muMiddle East. Palestinian National Charter yakatorwa ne PLO (Palestinian Liberation Organization) yakataura chinhu ichi pachinyorwa chayo chekutanga.
Nzvimbo inonzi Paresitina yaisanganisira nzvimbo dzeIsraeri neJorodani yanhasi. Pasi pechibvumirano cheLausanne chegore ra 1923 Turkey yakaisa nzvimbo dzese dzeParesitina pasi pesimba reBritain. Muna 1922 Britain yakapa zvikamu zvinokwana makumi masere kubva muzana zveParesitina kuTransjordan. Muna 1947 UN (United Nations) yakagovanisa zvikamu makumi maviri kubva muzana zvaive zvasara kuita nzvimbo mbiri, nzvimbo yevaArabu yechipiri, Parestina, uye Israeri. Vanhu vechiArabu vazhinji vacho muParesitina huru uye vaIsraeri vaive netsika dzimwechete uye mutauro mumwechete navo. MaArabu aive munzvimbo idzi akatanga kuzviona sechikamu chevanhu vemuParesitina muna 1967, makore makumi maviri mumashure mekunge Israeri yanhasi yaitwa nyika yakazvimiririra. Izvi zvakaitika mumashure mekunge maJuda akunda hondo nemazuva matanhatu ikatora nzvimbo dzekumadokero eJordani, yaive nemauto aive akurirwa. Kubva muna 1948 kusvika muna 1967 Jordani yaive yatonga nzvimbo dzekumadokero
VaParesitina ndivo vaiita zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vemuJordani saka nekudaro, vaitongwa nevanhu vashoma vehushe hwamambo Hussein.
Zvichibva kuna Mambo Hussein, matambudziko eParesitina aipereterwa achinzi “hupenyu kana Rufu” paJordani, uye aizoramba akadaro pamusoro pekuchengetedzeka kwenyika.
Mambo Hussein vaitya kuti hushe hweWest Bank yakazvimiririra yega iri pasi pePLO hwaizokanganisa chimiro chehushe hwake hweHashemite. Mapato akazvimiririra emuParesitina mazhinji aitsigirwa nemauto echiArabu, kunyanya mutungamiri wenyika yeEgipita Nasser, aipa rutsigiro munezvematongerwo enyika; neSaudi Arabia, yaipa rutsigiro rwezvemari.
Dambudziko guru rekubatana kwemaArabu kushaiwa kuvimbika kwavo uye simba ravo rekugona kutsigira rimwe bato richirwisa rimwe.
Zvikwata zvakapakata zvombo zvechiParesitina zvakazosimuka muJordani mumashure megore 1967 zvikatanga kurwisa Israeri uye zvikadzikisira hutungamiri hweJordani. Pakati pegore 1968 uye kupera kwegore 1969, kurwisana kusiri pasi pezviitiko mazana mashanu kwakaitika pakati pemagandanga echiParesitina uye mauto eJordani
Pachiitiko chimwechete chakaipisisa, “vaidaidzwa kuti mafedayeen (vaParesitina) muJordani vakauraya muuto wechiJordani, vakamucheka musoro, vakatamba nhabvu nemusoro wake munzvimbo yaaimbogara”.
Mauto ekuParesitina akabva aisa mutemo wematsamba ekufambisa akaita semavhiza, vezvekufambiswa kwezvinhu, uye nzvimbo dzekutarisa vafambi mumaguta eJordani, zvakawedzera kusagadzikika munzvimbo dzaive dzakamanikidzika kare dzaigara vanhu muJordani uye kumauto. Pakati pemwedzi waKukadzi na Chikumi 1970, vanhu vanosvika chiuru vakafa muJordani nekuda kwekurwisana.
Kwakazouya hondo pakati peJordani neParesitina pasi paYassir Arafat yakatanga ikapisa. Vanhu vazhinji vakafa paitambudzika vanhu veJordani kudzinga vanhu vechiParesitina vebato reFatah vaitungamirirwa naArafati. Kupindira kweSiria kwakaitwa muJordani kukabatsira vaParesitina. Kurwa kunotyisa kwakaitika kwemazuva gumi nerimwe kunozivikanwa nekunzi Black September, vanhu vanosvika zviuru zvishanhu vechiParesitina vakauraiwa nemauto eJordani.
Negore 1971 Jordani yakazokwanisa kuburitsa Arafati nehondo yake yeFatah yevaParesitina, vakazonopotera muRebanoni. Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaive vafa.
Mune mapato evarwi verusununguko anodarika manomwe muGaza, uye kurwa kwavo pachavo kwakaona Humas achiuraya vapikisi vake achizobuda akakunda zvinoratidza kuti vaParesitina havagare zvinerunyararo panzvimbo, kunyangwe vari pakati pemamwe maArabu.
Kurwa kunoita kunge ndiyo nzira yekurarama kumaArabu mazhinji muMiddle East.
VaSiria 3 00 000 vakaurayana mumakore matanhatu ekurwisana kwemarudzi avo kwakakonzeresa kuti kuve nevapoteri vanosvika mamiriyoni gumi nemaviri. Uku ndiko kuparadzwa kwerudzi rwevanhu kukuru kubva panguva yehondo yepasi rese yechipiri. Kunze kwekunge tikazvienzanisa nendufu dzevanhu mamiriyoni maviri uye vanhu vakatsakatika muna 1947 apo India nePakisitani dzakaparadzana kuva nyika mbiri dzakasiyana. Kwaive nevapoteri mamiriyoni gumi nerimwe vakabviswa kunyika imwe vachiendeswa kune imwe. Iyi yaive hondo pakati pemaHindu nemaMosiremu asi vaimbogara pamwechete murunyararo.
Muna 1971 Pakistani yeKumadokero yakarwisa Pakistani yekumabvazuva yaidawo kuzvimiririra yega ikazova Bangladesh. Vapoteri mamiriyoni gumi vakabva kuPakistini yekumabvazuva vakatizira kuIndia. Vamwe vapoteri mamiriyoni makumi matatu muPakistani yekumabvazuva vakabviswa panzvimbo dzavo. Mutungamiri wenyika yePakistani yekumadokero Yahya Khan aida kuti mauto ake auraye vanhu mamiriyoni matatu vekuPakistani yekumabvazuva. Mumwe wezvesainzi dzezvematongerwo enyika Rudolf Rummel akaita fungidziro dzekuti vanhu vanosvika 1500 000 vakaurayiwa. Hondo iyi yaive yakanyanya kuita yevaMosiremu nevaMosiremu sezvo vanhu vazhinji vaigara muPakistani yekumadokero nekumabvazuva vose vaive maMosiremu.
Zvakare, maMosiremu vaive vachirwisana pachavo.
Hondo yerusununguko yemakore masere, kubva muna 1954 kusvika muna 1962, muAlgeria yakaona vanhu vekuAlgeria vanosvika miriyoni rimwechete vachifa pavairwa neFrance kuti vabvise vanhu vekuFrance. Asi, tichiwedzera, munguva imwechete iyi vanhu vekuAlgeria 500 000 vakauraiwa nevamwe vavo vekuAlgeria mukati mekupandukirana kwemaArabu nekurwisana pakati pemasangano avo akasiyana.
Muna 1992 hondo yemarudzi yakatanga muAlgeria. Negore 2002 yaive yauraya vanhu 200 000 uye vamwe vanhu 15 000 vekuAlgeria “vakangotsakatika”.
Hondo yemakore masere kubva muna 1980-1988 pakati pemaMosiremu ekuIraq nemaMosiremu ekuIran ndiyo yaive yakarebesa pahondo dzese dzemusenturi yadarika yakasiya vanhu vanosvika miriyoni vafa uye pakupedzisira mapato maviri emauto aya akasara angori paakatangira pakatanga hondo. Nzira itsva kuIran yaive yekupa vechidiki vayo midhudhudhu kuti vaityaire vachipinda munzvimbo dzemigodhi yezvicherwa kuti vadhuure migodhi iyi kuti mauto aenderere mberi zvakanaka. Kufunga kwavo kwaive kwekuti zvaive nani kuti varasikirwe nevanhu vechidiki pachinzvimbo chemauto avaive vashandisa mari zhinji vachidzidzisa. Iran neIraq vose vaive maMosiremu eShiite. Asi chitendero chavaitenda machiri vese hachina kukwanisa kuvamisa kubva pakudeura ropa uku.
Afghanistan ndiyo imwe inogara iri pakurwisana pakati pemasangano akasiyana emaMosiremu. MaRussia paakaburitswa muAfghanistan, vezvehondo muAfghanistan vakabva vapandukirana pachavo. Izvi zvakatendera maTaribani kuti asimuke, vakaenderera mberi nekuuraya vamwe vavo maAfghanistan.
H0nd0 yemarudzi muYemen yakaona vanhu 16 000 vachifa pakati pegore 2015 na 2017. Hondo pakati pemaArabu nemaArabu dzakaenderera mberi dzichiitika.
Egipita yakazarawo kusawirirana kunozopinduka kuita kurwisana.
Ayatollah Komeini paakatora Iran kubva kuShah, vanhu vechiMosiremu muIran vaipikisa 70 000 vakauraiwa.
Zvinoita sekuti mamwe mapato echiArabu akavenga mamwe mapato echiArabu, saka vanoda kugadzirisa nhunha dzavo nekurwisana uye kuurayana.
Saka kurwisana hakuna muganhu mumaJuda nemaParesitina.
Kurwisana kunoita sekuti ndiwo magariro ezvinhu munyika dzekuMiddle East.
Rebanoni ine musanganiswa wemapato uye masangano ezvechitendero. Asi izvi hazvina kuvabvisa kubva pahondo dzemarudzi kubva mugore 1975- 1990 apo vanhu 120 000 vakafa uye vapoteri miriyoni rimwechete vakabuda muLebanoni. Nhasi uno kune vanhu 76 000 vakasiya misha yavo.
Kwemakore anodarika 3, 400, Jerusarema raionekwa nemaJuda seguta guru remaJuda. Jerusarema harina kubvira raita guta guru remaArabu kana vamwe vanhu vechiMosiremu. Kunyange vanhu veJordani pavakagara muJerusarema (1948-1967), havana kubvira vada kuriita guta ravo guru, uye vatungamiri vechiArabu havana kubvira vauya kuzoshanyamo.
MuBhaibheri remaJuda reTestamente Yekare, Jerusarema rakataurwa kanodarika ka669 uye Zion (rinowanzoreva kuti Jerusarema, kana kuti nyika yeIsraeri) rakataurwa ka 154, kana tikasanganisa kanokwana kuita ka823. Testamente Itsva yemaKristu inotaura pamusoro peJerusarema kanokwana ka154 uye Zion kanomwe. Jerusarema harina kubvira rataurwa nezvaro kana kamwechete muKoran.
Jerusarema harina kubvira rataurwa zvakare musungano yeParesitina.
Mambo Davidi vakatanga guta reJerusarema seguta guru renyika yese yeIsraeri. Mohammed haana kubvira asvika kuJerusarema iye pachake. Jerusarema rakaramba riri pasi pehutongi hweOttoman wekuTurky kubva muna 1517 kusvika muna 1917, uye pasi pehutongi hweBritain kubva muna 1917 kusvika muna 1948. Jordani yakazoritonga kubva muna 1948 kusvika muna 1967.
Saka maParesitina zvakadaro, haana kubvira atonga Jerusarema.
MaArabu mazhinji muJudea, Samaria neGaza kuWest Bank yerwizi rweJorodanni vari pasi pesimba rehutungamiri hweParesitina.
Vanhu vazhinji vanofunga kuti maArabu haana kubvira apihwa nzvimbo muIsraeri yavaigona kuzvitongera pachavo. Vakapiwa nzvimbo muna 1947, asi nyika tanhatu dzemaArabu dzese dzaive muKanzuru umu dzakaramba izvi. Vaida nzvimbo huru.
Vaida kuita hondo kuti vabvise Israeri zvachose, uye vaizotora nyika yose yoita yavo. MaArabu aive pakati pemaJuda akaudzwa kuti abve pakatanga hondo muna 1948. Vakavimbiswa kuti izvi zvaizotora vhiki kana kuti mwedzi kana nguva yatorebesa, kuti mauto emaArabu abvise maJuda. Ipapo maArabu aya aizodzokera mumisha yavo uye vaizotora nzvimbo dzose dzaive dzemaJuda. Saka vatungamiri vemaArabu vakarasisa vanhu vavo sezvo vakabva vakurirwa muhondo iyi maArabu akateerera vatungamiri vavo vakatiza , vakabva varasikirwawo nezvese zvavaive nazvo.
MaJuda aive arasikirwa nemaJuda mamiriyoni matanhatu kubva pamaJuda mamiriyoni mapfumbamwe aive muEurope kupfurikidza kuuraya kwaHitira achishandisa mweya wegasi. Vaive vapedzwa simba uye vaneteswa. Yaive nguva yakanaka kuti mauto enyika shanu dzechiArabu avarwise. Israeri yairatidzika seyaive isisina mukana wekukunda. Kusarudza kuramba nzvimbo kwakaitwa nemaArabu kwakaita kuti UN ipe Israeri chidimbu chenyika yavo uko vaizogara zvakasununguka kubva pakuita kwekuipa kweHorokasiti. MaArabu akarasika pakuronga tsoro dzavo. Nyika dzepasi rese dzakava nekanguva kaduku kekunzwa tsitsi pamusoro pevaIsraeri nekuda kwekutambudzika kwavaive vaita kukuru. Zvaive zvisina chekuita nekubata kwemutemo. Kaingova kanguva kaduku “kekuchemana” nenyika yaive yatambudzika kukunda dzimwe dzese muhondo yepasi rese yechipiri.sarudzo yeruzhinji muUN yaive ichiri nesimba. MaJuda aive asina kudzosera pakurwisa kweGerman. Vaive vangotambira dambudziko raive ravawira. Saka maArabu akafunga kuti vaizokunda zviri nyore muhondo nemaJuda aive mudambudziko. Asi zvisinei, nechishamiso, maJuda akakunda muhondo yegore 1948. Mwari aive achipindira ari kurutivi rwavo. Kurwadziwa nemimba chikamu chekufamba kwehupenyu. Kuzvarwa patsva kweIsraeri munyika yeChipikirwa kwaizouya nekurwadziwa kukuru uye kutambudzika.
Muna 2000, aive mutungamiri wenyika Bill Clinton, mugore rake rekupedzisira muWhite House, akaitisa chibvumirano pakati pemutungamiri wenyika yeParesitina Yassir Arafat nemutungamiri weIsraeri Ehud Barak chakazodarika tarisiro dzaClinton. Israeri haina kungozvipira kuramba nzvimbo yese yeGaza uye 94-96% yeWest Bank, akazvipirawo kubvisa chikamu chimwe kusvika kuzvitatu kubva muzana zveIsraeri, achipa kumaArabu kutonga pamusoro pekumadokero eJerusarema uye nzvimbo tsvene, dzakaita seGomo reTemberi, raive rakaera kumaJuda. Nyika yeParesitina yaizogamuchirawo US$30 biriyoni yekuripwa vapoteri vayo.
Arafati akaramba zvaaipihwa izvi. Akataura kuti kana akabvumirana kuva nerunyararo neIsraeri, aizouraiwa sezvakaitwa mutungamiri weEgipita Anwar Sadat. Saka vatungamiri veParesitina havatambiri zvibvumirano zverunyararo nekuda kwekutyira hupenyu hwavo.
Mumwe wevapi vemazano kuna Arafat aive pedyo naye zvakanyanya akati Arafat akaramba kuita izvi nekuda kwenungo chete. Aitora mari zhinji kubva kumaArabu vaipikisa Israeri uye vaiona Arafat semutungamiri wavo mukurwa. Nei pakaitwa nyika yeParesitina nebasa rese rinodiwa pakufambisa nyika mazuva ano? Aingogamuchira mari zhinji zvakadaro.
Nekuti maArabu haana kubvira aedza kuita zvibvumirano pamusoro penzvimbo, hatizivi kuti zvaizova zvakadii. Dai vakaedza izvi vangadai vakarasikirwa nenzvimbo dzavo zhinji kumaJuda, asi nhasi uno vangadai vakatora nzvimbo dzenyika zhinji pane dzavari nadzo nhasi. Uyezve, vangadai vasina matambudziko avo anosuwisa ehupoteri. Nekuita makaro ekutora nzvimbo yese muhondo ya 1948, vakaguma vave nenzvimbo duku zvakanyanya.
Vapoteri variko pasi rese, muenzaniso mukuru wedu isu vanhu wekutadza kugadzirisa matambudziko edu zvakanaka.
United Nations yakaita 15 Chikumi 2016 zuva revapoteri pasi rese. Vaiti kwaive nevapoteri 65 miriyoni panguva iyoyo. Kushaiwa zvakakwana uye mamiriro ezvinhu akaoma ndizvo zvakavawira.
Vamwe vanosvika mamiriyoni gumi vakanzi havana nyika dzavaibva, vasina mukana wekuwana chero kodzero dzakakosha.
Vakawanda vanoti Israeri iri kutora nzvimbo dzevaArabu zvisina kufanira. Asi tarisai kuti ndivanani varidzi veSiria?
Sanjak wekuAlexandretta yaive chikamu cheSiria yekumusoro kwakadziva kumadokero yakapihwa kuTurkey neFrance mumashure mehondo yepasi rese yechipiri. Hapana akaita seaiona kuti Siria yaigona kutora zvakare nzvimbo iyi, kunyange yakada kuenzana pakukura nenzvimbo inodaidzwa kuti West Bank.
VaSiria vakauraya vamwe vaSiria vanodarika 300 000, kubva muna 2011, kuitira kuti vamwe vaSiria vatore nzvimbo dzaive dzevamwe vaSiria. MaArabu e ISIS akatora nzvimbo huru kwazvo dzeIraq uye Syria kubva kune mamwe maArabu. MaMosiremu ekuTurkey nemaMosiremu ekuKurd anorwisana pamiganhu yawo. MaArabu eSunni neeShia anorwisana zvisina magumo. Yemen ine hondo pakati pemarudzi ayo, zvimwechete neAfghanistan. Kurwira nzvimbo dzenyika kukuru kwazvo munyika dzeMiddle East.
Muna 1948 mauto echiArabu aisarwira kuti atore nzvimbo dzawo kubva kumaJuda. Vakaudza maArabu aive muIsraeri kuti abude kuitira kuti nyika inge isina vanhu. Mauto avo echiArabu aizopinda, ouraya maJuda ovabvisa vose, maArabu aya aive abuda vaizodzoka votora zvose.
Chinangwa chehondo yegore 1948 chaive chisiri chenzvimbo dzenyika, sezvo maJuda aive nenzvimbo nhatu duku kwazvo muIsraeri. Chinangwa chehondo iyi chaive chekupedzisa zvaive zvatangwa naHitira- kubvisa nekuparadza maJuda ese.
VaParesitina pavaive muJordani mumashure megore 1967, vakapedza nguva yavo zhinji vachirwisa vanhu vemuJordani vachiedza nepavanogona napo kubvisa mambo Hussein. Vanhu vanosvika 20 000 vakafa muhondo yevaArabu nevaArabu iyi. VaParesitina vaive vasiri vavakidzani vakanaka, zvichibva kuna Hussein. Akazovabvisa. Uku ndiko kuita kwekugarisana pakati pemaArabu echiParesitina.
Vanhu vakawanda vanoti Nasser aive mutungamiri wechiArabu akanaka. Mutungamiri wenyika yeEgipita Nasser aive munhu aive nemuromo mukuru kwazvo aingotaura, asi akakanganisa zvikuru paakavimba mukutaura kwake kwekuda kuparadza Israeri. Apo, muna 1967, akataura kuti vachengetedzi verunyararo veUnited Nations vabude, vaive vakamira pakati peEgipita neIsraeri, nzira yaive yazarurwa kuti arwise. Ipapo kuzvikudza kwake kwaive kwava panjodzi. Aive ataura kuti aizorwisa saka aida kuramba ari chiso chenyika yevaArabu. Aizvinyengedza achiti aive mutungamiri wenyika dzevaArabu. Kukunda pamusoro peIsraeri kwaizomuita akakosha pakati pevaArabu.
Egipita pachayo yaisakwanisa kuparadza Israeri. Asi kwaivewo neSiria neJordani. Kana vose vari vatatu vakatanga kurwisa pamwechete, Israeri yaizova ichirwa hondo nemativi matatu. Ichi chinhu chakaomera chero nyika. Nzira imwechete yekusimbisa kubudirira kwemaJuda kwaive kurwisa vaEgipita, Jordani neSiria nguva dzakasiyana.
Izvi zvaigoneka chete kana Israeri ikatanga kurwisa. Saka kwaive kuratidzira kukuru, kuchengetwa kwezuva reSabata. Vakarwa kwemazuva matanhatu runyararo nekuzorora zvikauya nezuva rechinomwe. Kana kukunda muna 1948 pamusoro penyika shanu dzechiArabu chaive chishamiso, hondo inenge mheni iyi yemuna 1967 chaive chishamiso chechipiri. MaArabu akatadza kuona kuti Mwari aive otendeukira kuIsraeri.
Ndechimwe chinhu kana maArabu achiramba achivimbisa hondo, vachivaka masimba avo pamiganhu yenyika, vachibvisa vanochengetedza runyararo, vochema zvakanyanya kuti rumwe rutivi rwaenda kuhondo. Zvinoratidza kusagadzikika uye huwori huri mumafungiro emaArabu pamusoro pevaIsraeri. VaIsraeri vanhu vaMwari, saka mamwe marudzi ose anonzwa achida kupikisa maJuda. Kana Mwari achida kuti maJuda adzokere mumusha mavo, Satani anozopikisa chinhu ichi nepese paanogona napo.
Kumwe kutaura kwemazuva ano kunoti maArabu anotenderwa kurwisa Israeri (pasi rese rinozogara rotarisa zvaro) asi Israeri haitenderwi kurwisa maArabu nekuti pasi rese rinobva rakakavara nezvazvo.
Hondo yemugore ra 1973 yakarwiwa kwemavhiki matatu. Vhiki rekutanga Israeri yakarohwa nesando yakauya vasingafungiri. Hapana akataura chinhu. Vhiki rechipiri United States yakabatsira maJuda nezvombo zvepamusoro zvakaunzwa kubva kuAmerica totenda kumasimba avo ezvendege makuru. Mukutambudzika kwehupenyu kana rufu Israeri yakamisa kupindira kweEgipita neSiria. Vhiki rechitatu maArabu akasairirwa achidzokera shure achikanda zvombo pasi, pasi rese rikaridza mhere richidanidzira kuti hondo imiswe. Uku ndiko kuita kwehuwori kuri panyika nhasi uno. Israeri inotenderwa kukurirwa, asi haitenderwi kukunda.
Ruvengo rukuru urwu pamusoro peIsraeri runoratidza kuti pane kurwa kwakadzama kwemweya kuri kuitika. Satani haadi kuti Israeri idzokere kumusha kwayo. Israeri ndiyo yega nyika inodaidzwa naMwari kuti nyika yake. Saka Satani anofanira kupikisa maJuda. Basa raSatani nderekupikisa Mwari. Zviite muKristu Satani anenge akamirira kukupikisa. Mwari ari kuda kuti maJuda adzokere munyika yawo yechipikirwa kuti vanosangana naMessias wavo. Satani anotomutsa vavengi kuti amise maJuda kunogara muMusha wavo weChipikirwa.
Renje reSinai raive risiri chikamu chenyika yeIsraeri yekutanga. Havana mvumo kubva kuna Mwari yekugara munzvimbo iyi mumashure mehondo yemazuva matanhatu yegore 1967. Uku kwaive kukanganisa kwavo. Saka mumashure mekukunda hondo yemuna 1973, vakadzosera Sinai kuEgipita. Kuvandira kwavakaita murenje reSinai pakutanga kwehondo yegore 1973 kwaive kuyeuchidza maJuda kuti vasatore zvidimbu zvenyika zvaive zvisina kuvimbiswa kuna Abrahama. Makomo eGorani chikamu chenyika yeIsraeri yekutanga yakapihwa kuna Abrahama naMwari. VaSiria vane makanoni avo munzvimbo idzi uye vanogona kuparadza maJuda chero nguva yavanoda. Munezvehondo, maJuda havamiri paGorani. MaJuda vaingokwanisa kukunda vsSiria panzvimbo iyi. MaJuda paakapamba Rebanoni, vakazosiya muna 2 000 sezvo vaive vabuda mumiganhu yenyika yavo yechipikirwa Hizballah yakabva yavamanikidza zvakare kubuda muhondo muna 2 006. MaKristu anofanira kurarama mukati meBhaibheri. MaJuda anofanira murarama mukati memiganhu menyika yakapihwa kuna Abrahama naMwari.
Zvisinei, nzvimbo dzenyika ndedzeavo vanenge vakunda muhondo. ISIS yakatonga guta reMosul mumashure mekurikunda. Iraq yakabva yatora Mosul kupfurikidza ruvoko rwehondo. Anenge akunda muhondo, anobva atonga nyika.
Muna 1893 vekuAmerica vakamanikidza mambokadzi wekuIsland yeHawai kuti asiye chinzvimbo chake. Nhasi uno Hawaii iri pasi peAmerica. Mauto eAmerica akakunda mared Indians akapamba nekutora nzvimbo dzavo. Vakatanga hondo pamusoro peMexico vakatora Texas, New Mexico uye California kubva kuvanhu vekuMexico. Nzvimbo idzi dzaitove hafu yenyika yeMexico.
Kana maJuda akakunda maArabu, vanozotora nzvimbo dzine maArabu kana vachida havo. Kana maArabu akakunda maJuda, vanobva vatorawo nzvimbo dzevaJuda. Muhammad akatungamirira hondo kuuya kuzopamba Mecca. Akabva atora Mecca. Izvi zvakabva zvatanga kuita uku. Chero munhu anenge akunda muhondo, anobva agara otonga.
Mumashure mehondo yepasi rese yechipiri Russia yakatora Manchuria, Poland neEurope yekumabvazuva. Nei maArabu asina kusimuka kuti arwise nekuda kweizvi? Rusia yakanga yatora Crimea. MaArabu haana kutora hondo kuti avapikise. China yakapamba Tibet, nanhasi vachiri kuitonga. Hakuna kuuya hupikisi hunonzwikwa kubva kunyika dzevaArabu. Muna 2008 Russia yakatanga kugarwa kwenzvimbo mbiri dzeGeogia nemauto. Mauto eRussia akagara munzvimbo idzi. Nzvimbo dzakapoteredza guta reKargil riri pamiganhu yePakistani dzakapambwa mugore ra 1971 nemaIndia vakabva vadzitora kuita dzavo. Aksai Chin, nzvimbo dzemumiganhu dziri pakati peChina neIndia, dzakapambwa neChina muna 1962 china ikadziita dzayo.
MaTaribani akapamba vakuru vezvehondo muAfghanistan akatora nzvimbo dzavo. Nei maArabu asina kupikisa kuita uku? Chikwata chemaArabu ISIS chakatora nzvimbo dzenyika zhinji dzeIraq neSiria nemasimba ehondo. Kana pasi rino rikaudza ISIS kuti idzosere nzvimbo idzi, ISIS ichateerera here? Kwete. Ndeupi mupambi anodzosera nzvimbo dzaakakunda kana asingadi? Vapanduki muSiria vakatora nzvimbo huru dzenyika muSiria kubva kumutungamiri wenyika Assad. Vanofanira kuidzosera kwaari here? Kana vakurirwa muhondo chete.
Kutanga mugore 634 AD maMosiremu Cariphati akasimuka kubva kuAfghanistan kuenda kuSpain- nekuti maArabu aive varwi vari nani, vakabva vachengeta zvavaive vapamba. Muhammad akatungamirira sezvo aive munhu ane chipo munezvekurwa. Zvimwechete naGhengis Khan, zvimwechete naAtilla muHun, naAlexander the Great. Vanokunda muhondo, vanobva vatora nzvimbo dzenyika dzavanenge vakunda.
Vanhu vazhinji vanotenda kuti maArabu anoita zvaanoita chete nerutsigiro rweUnited Nations (UN).
Muna 1947 UN yaida kupatsanura Israeri, maArabu akaramba. UN haina kubvira yasarudza hondo muna 1948, saka maArabu akabva aita zvaakaita kunze kwekutendera kweUN vachizadzisa kuda kwavo pavakatanga hondo pamusoro peIsraeri.
Vakaita zvinhu vachipikisa UN yaida kuita hushe huduku hwemaJuda muParesitina.
Nasser akaudza vachengetedzi verunyararo veUN kuti vabve muSinai muna 1967. Hakuna maArabu akamushoropodza nekuita zvinhu achipikisa mutemo weUN.
Saka maArabu anoshandidzana uye anopikisa zvakare UN pavanodira.
Hakuna maArabu akamisikidzana naSaddam Hussein munguva yehutongi hwake hwekuuraya muIraq. Akauraya vanhu 5000 vechiKurd negasi rakaipa muruwa rwaigara vanhu asi hazvina kumutsa kukakavara mumaArabu. Makuva makuru paakacherwa muIraq, hakuna hapana kukakavara kwemaArabu kwakanzwikwa. MuArabu Saddam akauraya mazana ezviuru zvevanhu vechiArabu muIraqi munguva yehutongi hwake hwemakore makumi maviri nematatu.
Makore makumi mana nemaviri ehutongi hwakaipa muRibia nemudzvanyiriri aive nehutsinye Gaddafi zvakaita kuti nyika iyi ive musanganiswa wakaipa wezvikwata 1 700 zvevarwi vakapakata vanorwira zvido zvavo uye dambudziko munezvemari zviri kubatsira kusimuka kweISIS. Kurwisana pakati pemaArabu nemaArabu hakusi kuratidza kuti kuchapera.
Kana maArabu achikwanisa kuvengana nekuurayana pachavo, zvinoshamisa here kuti kurwa neruvengo pakati pemativi ese emaJuda nemaArabu kunokwanisa kurasikira kuita hondo dzakaipa kwazvo. Mativi ese, maJuda nemaArabu, vakauraya vanhu vasina mhosva vemazera ese. Izvi zvakaipa kwazvo, asi chiratidzo cheruvengo rwakadzama. Zviuru zvemaroketi zvakakandwa kubva kuGaza zvichipinda muIsraeri. Israeri ndiyo yega nyika mazuva ano ine muvakidzani anokanda zvombo zvemaroketi mairi.
Ndiyani anoziva kuti angararame sei mumamiriro ezvinhu akadai? Kudenhwa kunokonzeresa kudzosera. Muhondo dzemazuva ano, vanhu vasina mhosva ndivo vanotambura. Chinhu chakaipa kumativi ose. Asi kusvikira kukandwa kwemaroketi kwamira, uye mataneri epasi amira kuunza vanhu vakapakata vanorwisa, kuuraya nekutapa maJuda, kurwa kucharamba kuchienderera mberi. Izvi hazviiti kuti mbiri yemativi aya ese ari maviri ive yakanaka. MaJuda vanhu uye vanokwanisa kuita zvinhu zvakaipa vokanganisa. Uye maArabu ane kutadza kumwechete uku.
Kuurayana haisi nzira yekugadzirisa zvinhu yenguva refu. Ruvengo rukuru runorarama pakati pemapato maviri anopikisana aya muMiddle East runoita kuti runyararo chive chinhu chehutorwa kwavari, kwete kuParesitina – Israeri chete asiwo kuSiria (nemapato eko anorwisana uye kumukirana zvikuru) neIraqi neEgipita neRibia neYemen neAfghanistan, tisingatauri kurwisana kuri muPakistani pakati pemaMosiremu neTurkey neSudan nedzimwe nyika dzakadaro.
Mukati megore 1977, kurwisana kwevanhu vakapakata kunokwana kuita zviitiko makumi mana kwaiitika munyika dzakasiyana. Hapana nguva refu vanhu mamiriyoni mashanu vaurayiwa kuCongo, miriyoni rimwechete kuRuwanda nedzimwewo nyika. Combodia ine vanhu mamiriyoni mashanu, chikwata chevarwi veKhner chakatora hutongi mugore ra 1975 -1979 chakauraya vanhu vanosvika miriyoni rimwechete vekuCombodia. Makumi ezviuru zvevanhu vakafa muhondo dzezvinodhaka dzekuColombia. Zviuru zvevanhu zvakafa muhondo dzezvinodhaka muPhilippine. Africa zvakare yazadzwa nehondo dzekumukirana kwemarudzi, magandanga, uye kuvengana pakati pemarudzi. Musenturi yakadarika vanhu 100 miriyoni vakaurayiwa muhondo dzepasi rese. Satani ari pahondo uye vanhu vakatsamwa ndivo zvombo zvake vanoita basa rake.
Zviri nyore kunongedza tichipomera maJuda, asi tinodawo mimwe minwe mizhinji yekunongedza vamwe vazhinji varimo mukati mekurwisana kusingaperi uku. Maoko emaArabu haanawo kuchena panyaya iyi.
Saka kutaura kuti panofanira kuva nerunyararo pakati pemarudzi chinhu chakanaka, asi kazhinji hazviitiki nenzira iyoyo. Uku kuratidzirwa kunosuwisa kwerudzi rwedu vanhu vakazara zvivi. Kubvira pakaedza Kaini kugadzirisa kusawirirana nekuuraya Aberi. Nanhasi hatisati tadzidza nzira iri nani yekugadzirisa zvinhu nayo.
MaArabu akatora nzvimbo yeParesitina nekuti Mwari akavimbisa kuti achaisa maIsraeri munyika dzehutorwa ovaparadzira kana vakasaterera Mwari. Vakaroverera Messia wavo Mwari achibva ashandisa vaRoma kuvaparadza.
Pfungwa iyi yakanaka, asi vaRoma Chitsauko 11 yakavimbisa kuti Mwari achadzosa maJuda akabviswa munyika mavo akapararira nenyika. Pavanongodzoka munyika yavo yechipikirwa, maprofita maviri Mosesi naEria vachavagadzirira kuti vave vari vakagadzirirwa Kuuya kwaMessia munguva yeKutambudzika kukuru. Saka maJuda achadzoka kunyika yavo yeChipikirwa zvisinei nekuedza kuchaita matambudziko kana ruvengo rwemaArabu kuvamisa. MaArabu nevaParesitina vari pasi rese havakwanisi kumisa sungano yaMwari kuti iitike.
Chikamu cheruvengo rukuru urwu ndechekuti maJuda, zvisinei nekuipa kana kukanganisa kwavo, vane chivimbiso chekuti Mwari achadzoka kwavari. Mwari haana kubvira ataura izvi kune chero rumwe rudzi.
Satani anoda kumisa maJuda kuti vasagadzirire kuuya kwaMessia. Izvi zvinoreva kuti Satani anoda kuvaparadza ivo zvese neMusha wavo. Saka, zvinosuwisa, anoshandisa vavakidzani vavo kuedza kuvaparadza. Satani achaita zvakaipa zvizhinji kwavari, asi zvakadaro maJuda achararama, uye maProfita avo maviri vachavatungamirira kuenda kuna Messia wavo. Kunobva kwauya Amagedoni, ndinonzwa tsitsi pamusoro peavo vanovenga maJuda pavachange vatarisana naMwari nekutsamwa kwake kukuru. MaJuda vana vaMwari. Mwari haasi kuzotendera kuti vaparadzwe, zvisinei nekuti maArabu aedza zvakaita sei, uye kuti vangaite sevari kubudirira sei kuita izvi. MaJuda ane chivimbiso chekuti achasangana naMwari muIsraeri saka izvi zvinovaita vakundi vakuru.
Mugore ra 1900 kwaive nevadzidzisi veBhaibheri vaidzidzisa kuti chiporofita cheBhaibheri chaitaura kuti maJuda vachadzokera mumusha wavo weChipikirwa chaisafanira kutorwa sechokwadi nekuti panguva iyoyo zvaiita sezvinhu zvisingagoneki kuti zvigoitika. Asi, makore zana akazotevera, maJuda ave mumusha mavo zvisinei nekuedza kwakaita Horokasiti yakauraya zvakanyanya kukunda kumwe kuita kwese munhorondo. Zvisinei nedzimwe hondo ina dzavakaita nemauto akasimba echiArabu. MaJuda ane mumiririri parutivi pavo.
VaParesitina vakarasiswa zvakanyanya nesarudzo dzevakuru vavo dzakaipa, vakavimbiswa nyika ine mapato maviri muna 1947, zvakare muna 2 000. Zvisina kuchenjera vakarambana nazvo nguva idzi dzose. Saka Israeri yakarwa zvakasimba kuti ichengetedze nyika ine bato rimwechete. Hondo dzavo zhinji nemaArabu dzakaita kuti maJuda aone kuti vanoda hudzamu kuti vakunde kurwiswa kana vachida kurarama. Izvi zvakaburitswa pachena muna 1973 apo kurwiswa kwakauya pamusoro pavo vakavarairwa kubva kuvaEgipita nevaSiria kwakaisa vanga guru pakuchengetedzeka kwemaJuda.
Parizvino vaParesitina vave kuda nyika ine mapato maviri, sezvo izvi zvinozovapa nzvimbo huru kupfuura yavari nayo parizvino. Asi Israeri inoda imwe nyika yekuvengana nayo here parutivi rwayo? Israeri haina kunyanya kukura. Kuwanda kunoita kukandwa kwemaroketi naHamas muIsraeri, ndikowo kukura kunoita ruvengo rweIsraeri ichiona Hamasi iri muvakidzani wayo, sezvo vanozoita Israeri nzvimbo yakazarurwa yavanokanda ndudzi dzese dzezvombo zvavo.
Zvinosuwisa kuvaParesitina kuti vatungamiri vavo vakaramba chibvumirano chekuti vave nenzvimbo muIsraeri. Nzira iyi ingadai yakashanda zvakanaka kwavari. Asi nekuda kwekuda hondo kwakanyanya kwavari nako nhasi uno pamusoro pevaJuda, hazvingashandi.
United States iri kurutivi rweIsraeri zvakazara. Israeri ndiyo yega nyika iri muMiddle East inotsigira America. Nyika dzechiArabu dzinoshoropodza US zvakanyanya, vanodaidza America kuti Satani mukuru. Izvi hazvizounzi maArabu pedyo neAmerica. Nyika dzese dzechiArabu dzinotsigira Gaza, zvisinei nekuti Hamasi akanda maroketi kuIsraeri kana kuti haana. Vanobva vapomera America mhosva nekuda kwekutsigira Israeri, zvakanaka kana zvakaipa. Uku hakusi kufunga kwakanaka.
Parizvino Russia yakapindira kurwa kuri muSiria. Izvi zvinobva zvaomesa chimiro chezvinhu.
Hakuna bato rakavimbika muMiddle East. Bato rega-rega rine chinangwa. Simba reAmerica riri kudiwa kuti ritsigire Israeri parizvino.
Parizvino, Mwari akashandura mamiriro ezvinhu kuitira kuti Israeri irarame.
Hizballah (inodaidzwa zvakare kuti Hezbollah) yakasimuka kuva uto rine simba kwazvo muLebanoni. Mugore 2006 vakarwa hondo huru nemaIsraeri vakaita sevaive vokunda maJuda. NeHizballah ine simba kwazvo, uye neSiria kumiganhu yayo yekumusoro, Israeri yaive panjodzi kwazvo. Hondo yemarudzi yakabva yatanga muSiria muna 2011 pakaedza mutungamiri wenyika Assad kumisa kuratidzira kwevaSiria vaipikisa hutongi hwake hwakaipa. Assad aive achirasikirwa nenzvimbo dzenyika yake, saka akabva adaidza Hizballah kuti imubatsire. Nekuti Hizballah neSiria zvakavharirwa muhondo yemarudzi muSiria, hapana pakati pavo anokwanisa kurwisa Israeri panguva ino. Mugore 2017 hondo yakaipa iyi yanga yatokwanisa makore matanhatu nendufu dzevaSiria dzinodarika 300 000 nevapoteri mamiriyoni gumi nemaviri vakabviswa munzvimbo dzavaigara. Uyu ndiwo mubairo unosuwisa kuvaSiria wavari kuripira pamusoro peruvengo rwavanarwo kuvaIsraeri. Kana vaSiria vachirwisana pachavo Mwari ari kukwanisawo kuvaita kuti vasarwise maJuda. Ruvengo urwu pakati pevaSiria ruri kuitawo kuti Hizballah isawane nguva yekurwisa maJuda.
Yemen yaive imwechete yenyika nomwe dzakareva hondo pamusoro peIsraeri muna 1948. Parizvino vakatarisana nehondo yemarudzi iri kuuraya zviuru zvevanhu yakauyawo nechirwere chekorera.
Saka maArabu mazhinji akavenga Israeri, asi hondo dzavo ivo pachavo maArabu nemaArabu dziri kuvaparadza zvakanyanya.
Simba reAmerica rinodzivirira Israeri kubva pakurwiswa asi kana America ikaparara, zvichatora maprofita maviri vane simba rekubata mamiriro ekunze uye mamiriro ezvinhu vorova nyika nehosha, izvi zvichadzikisa simba rinenge richiedza kuparadza Israeri. Ipapo maJuda 144 000 achasangana naMessia. Pakupedzisira achadzoka paAmagedoni kuzoparadza chikara nehondo dzacho. Vose vaya vakarwisa Israeri vachaona kuti vakanyengerwa, uye vaive parutivi rusiri irwo nguva yese. Ipapo vachatarisana nekutsamwa kwaMwari, vanhu vanokwanisa kuzongovanzwira tsitsi chete.
Ropa ravo richaerera kwemamaira 2 00 kusvika kumiganhu yemabhiza. Ropa iroro richanyura muvhu, roita kuti ivhu iroro rive rakaworera zvekuti renje richabukira seruva. Ndicho chinhu chekupedzisira chichaitirwa maJuda anenge achirarama nevavengi vavo. MaJuda ndivo vakundi vakuru.